DefenceOne: 93% Awooda Al-Shabaab way korortay iyado ay socdaan Duqeymaha Maraykanka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
DefenceOne: 93% Awooda Al-Shabaab way korortay iyado ay socdaan Duqeymaha Maraykanka.
On Oct 8, 2019 3,751 0
Warbixin ay qortey haweeney ka faalloota arimaha Amaanka, xubinna ka ah machadka New America’s International Security Program, ee sameeya diraasaadka ka hadla arimaha Amniga, ayay ku sheegtay iney aad u kordheyso awooda Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, xilli dalka Soomaaliya ay ka dhacayaan howlgallo militeri oo ay fulinayaan ciidamada Maraykanka.
Warbixintan oo ciwaan looga dhigay “waxyeellada ka dhalaneysa dagaalka qarsoon ee maamulka Trump kaga jiro Soomaaliya” ayaa waxaa qortey haweeney lagu magacaabo Mellisa Salyk, waxaana lagu baahiyay website-ka DefenceOne ee laga leeyahay Maraykanka.
“6-dii Decembar 2017-ka, diyaaradaha Maraykanka ayaa duqeeyey gaari ay dad shacab ah saarnaayeen, oo kusii jeeday tuulada Ilimey oo qiyaastii 130KM koofnur galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halkaasna waxaa ku dhintay 5 qof oo shacab ah” ayaa lagu yiri warbixinta.
Sida ay sheegeyso Mu’assada New America, duqeymaha Maraykanka, iyo weerada habeen guureynta ah ee ay ciidamadu Maraykanku ka geysanayaan Soomaaliya ayaa aad u kordhay sanadihii lasoo dhaafay, kuwaas oo waxyeellada ugu badan ay kasoo gaareyso dad maatida ah.
Haweeneyda qortay Warbixinta waxay is weydiineysaa “ Duqeymahan ma waxay hoos u dhigayaan waxa loogu yeero “Argagaxisada” Soomaaliya, mise waxay sii kordhinayaan dhibaatada gaareysa shacabka iyo misdaaqiyadda Maraykanka ?
Waxay Warbixintu soo gudbineysaa in Africom ay mar weliba sheegato in duqeymaha ay fulineyso aaney wax ku noqon dad shacab ah, taas bedelkeedana ay beegsadeen dagaalyahanno katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Warbixinta ay qortey Mellisa, oo ah xubin katirsan machadka New America’s International Security Program, waxay qeybaha dambe kaga hadleysaa in awooda Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii korortey, inkastoo Africom ay ku doodeyso iney dishey dagaalyahanno badan.
“Inkastoo AFRICOM ay sheeganeyso in howlgallada duqeymaha ee ay ka fulineyso Soomaaliya ku dishey dagaalyahanno aad u badan, hadana weli majirto nuqsaan ku timid awooda Al-Shabaab, balse taas caksigeeda, warbixin laga qoray korarka Argagaxisada caalamiga, waxay sheegeysaa in korar gaaraya 93% uu ku yimid howlgallada ay Al-Shabaab ka fulineyso Soomaaliya, taasina waxay keentay in dalku kamid noqdo lixda wadan ee saameynta ugu badan ku leeyihiin waxa loogu yeero argagaxisada” ayay tiri haweeneyd qorta warbixintan,
Siyaasiyiinta Maraykanka ee qaabilsan arimaha waxa loogu yeero Argagaxisada ayaa dhaliilaya siyaasadda Trump ee Soomaaliya, waxayna sheegayaan in duqeymaha drones bil caksi ay sii kordhiyeen awooda iyo weerarada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Nicklos Russmeson oo horey madax uga ahaa xarunta qaranka ee la dagaalanka Argagaxisada, hadana ah madaxa Amniga Qaranka iyo la dagaalanka Argagixisada ee machadka Mackin ayaa yiri “ weli iima cada in siyaasadan lagu socdo ay yareyn karto dhibaatada waxa looga Argagaxisada geeska Africa”.
“Inkastoo AFRICOM ay diidantahay in duqeymaha ay fulineyso ay wax ku noqdaan dad shacab ah, hadana bishii April waxay soo saartay bayaan ay ku sheegeyso in duqeyn bishii MAY 2018-ka ka dhacday Soomaaliya ay ku dhinteen labo qof oo shacab ah” ayaa tiri haweeneyda qortay warbixinta.